थाइल्यान्डमा मसित कार छैन, म यहाँ सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्छु : पूर्णिका शाह - News20 Media
June 22, 2020 June 22, 2020 N20LeaveaComment on थाइल्यान्डमा मसित कार छैन, म यहाँ सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्छु : पूर्णिका शाह
राजतन्त्र ढलेपछि आम नागरिकमा परिणत भएको पूर्वराजपरिवारप्रति अहिले पनि जनचासो उत्तिकै छ । पछिल्लो समय युवा पुस्तामा चर्चा कमाइरहेकी पूर्वराजपरिवार सदस्य हुन् पूर्णिका शाह । पूर्वयुवराज पारस र युवराज्ञी हिमानीकी जेठी छोरी पूर्णिका अहिले अध्ययनका क्रममा थाइल्यान्डमा छिन् । इन्टरनेसनल बिजनेसमा स्नातक अध्ययनरत उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्वीर र स्टाटसहरू अपडेट गरिरहन्छिन् ।
‘तपाईंका बुबा र हजुरबुबाले वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको हत्या किन गरे ?’ एकजनाले सोधे ।
प्रश्न : तपाईंको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो र तपाईं तनाव र दबाबलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
प्रश्न : तपाईं आफ्ना भाइबहिनीसँग कत्तिको झगडा गर्नुहुन्छ ?
प्रश्न : तपाईंको चम्किलो त्वचाको रहस्य के हो ?
अब पहिले जस्तो सोलोडोलो लकडाउन नहुने, फेरियो मोडालिटी !